लामो पहिले, ज्योति मा खेल यस Sims बाँकी। समय को लागि यो मानव जीवनको एकदम सफल सिमुलेशन थियो। तर समय, मा जान्छ पूर्णता को संभावना र खेलाडीहरू थप र थप नवाचारै आवश्यक छ। यस Sims श्रृंखला को रचनाकार वर्ष पछि हामी सफल थिए र नयाँ खेल यस Sims4वास्तविक गर्न भर्चुअल संसारमा ल्याउन।
के हो "यस Sims 4"
त्यसैले, आफ्नो ध्यान एक ब्रान्ड नयाँ, भनिन्छ "यस Sims 4" वास्तविक जीवन सिमुलेशन खेल नजिक प्रस्तुत गरिएको छ। सकेसम्म धेरै सही तपाईं ठ्याक्कै चाहनुहुन्छ उर्तानु मदत गर्न सम्पादक एक वर्ण, वस्त्र, फर्नीचर सिर्जना गर्ने, र अब मौका। यसरी, तपाईं सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ भन्नु, आफूलाई, आफ्नो साथीहरू र परिचितहरू, विस्तृत तिनीहरूलाई बसोबास गर्न र घर मा काम, र त्यसपछि तल बस्न र तिनीहरूलाई मदत गर्न आफ्नो "ट्रस्ट" को कार्यहरू हेर्नुहोस्। प्रत्येक खेल र NPCs आफ्नै प्राथमिकता, स्वाद र भावना छ मौका दिनेछु। भर्चुअल जीवन बिताउन, परिवार निर्माण गर्न, जागिर प्राप्त प्ले, कुराहरू सङ्कलन र अन्य Sims नयाँ जडानहरू बनाउन,! दैनिक मानव जीवन को व्यावहारिक भर्चुअल संसारमा आफूलाई डुबाउनुहोस्! "यस Sims 4" पीसी मा सेप्टेम्बर 2014 मा जारी र खेलाडी लगभग असीमित सम्भावनाहरू संसार दिनुभयो थियो।
फरक के छ
के खेल "यस Sims 4" यसको predecessors फरक छ? यो एक वर्ण सिर्जना भएको पहिले नै अत्यधिक विस्तृत प्रक्रिया देखि यस Sims3मा केही मतभेद नयाँ खेल मा तपाईं आफ्नो वर्ण को परिवारमा gait, आवाज, बानी, वर्ण, र संचार सम्पादन गर्न सक्षम हुनेछ छ। यो खेल परिवार, आवाज, व्यक्तित्व लक्षण र प्राथमिकतामा सम्बन्धहरु संग "खेल" सक्छ अन्तिम लाइन मा। त्यसैले, तपाईं अब रूपमा चिनिएको छ जसले कुनै पनि व्यक्तिको रूपमा सही सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। मा "यस Sims 4" सम्पादक चरित्र सिर्जना 45 Sliders भनेर भर्चुअल मानव शरीर को भाग सम्पादन गर्न अनुमति को कुल संग endowed छ। यस Sims मा यस्तो सम्भावना भएको Sliders को दोस्रो भाग मा लगभग थिएन, थियो - यो सबै "ढेर" बाट एक विकल्प को विकल्प तल आउँछ उपलब्ध, तेस्रो Sliders थप लोकप्रिय बनेका छन्, र बाद मा, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, तिनीहरूलाई भरिएको छ।
निस्सन्देह, त्यहाँ पनि जो मार्फत तपाईं आफ्नो Sims हेर्न हुनेछ कोठामा, मा परिवर्तन हो। तपाईं प्रतीक्षा यो वा त्यो स्थान progruz सम्म, सम्पूर्ण कार्ड तत्काल उपलब्ध हुनेछ आवश्यक छैन। यो सुविधा पहिले खेलौना को तेस्रो भाग मा देखियो। अब "यस Sims 4" सिर्जना घर छ के एक सानो कुरा गरौं।
निर्माण बारेमा बिट
खेल मा एकदम महत्त्वपूर्ण भाग "यस Sims" एक घर निर्माण गरिएको छ। यो गतिविधि सामान्यतया प्रयास र डिजाइनर को भूमिका को सबै भन्दा बनाउन खेलाडी drags। यो Sims3मा एक घर निर्माण गर्न, यो सबै छ कि जस्तो देखिन्छ। तैपनि, नयाँ भाग खेलाडीहरू नयाँ संभावनाहरु खुल्छ। प्लेयर गर्न "यस Sims 4" मा माग अगाडि सानो राख्नु - बस उहाँले अपार्टमेन्ट / घर / बगैचा / ogrod कस्तो चाहन्छ थाहा। निस्सन्देह, विस्तृत। यो कस्तो अर्थ राख्छ?
यो चासो प्लेयर के पर्खालहरु को उचाइ, तल्ला योजना र छत उहाँले चाहनुहुन्छ थाहा हुनुपर्छ भन्ने छ। त्यो छ, अघिल्लो installments विपरीत, खेल निर्माण र डिजाइन को सबै तत्व संग "वरिपरि प्ले" पूर्णतया मौका दिन्छ। साथै, अब तपाईं घुमाउन र सारा कोठा पल्टाउन सक्नुहुन्छ। यस मामला मा, कम्प्युटर नै उहाँलाई अगाडि छुट्टै कोठा भनेर बुझेका छन्। छिटो, सजिलो र सुविधाजनक। कोठा सजावट, तपाईं उपलब्ध छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईं आफ्नो सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ! एक वास्तविक निर्माता रहन!
आलोचना को एक बिट
जतिसुकै राम्रो वा खराब न त यो वा त्यो खेल थियो, यो अझै पनि आलोचना गर्न विषय हुनेछ। अब हामी मान्छे नयाँ यस Sims4खेल विचार के कुरा जाँदैछन्।
निस्सन्देह, जो खेलको लागि प्रतीक्षा थिए प्रशंसक, लगभग एक वर्ष आधिकारिक घोषणा पछि, बस खुसी जारी थियो। तिनीहरूले "यस Sims 4" सम्पादक चरित्र सिर्जना, जो तपाईंलाई छिटो र सजिलै एक वास्तविक व्यक्ति को प्रतिलिपि सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ, र निर्माण अब धेरै सजिलो र छिटो छ जो संग घर सिर्जना, को सम्पादक छन् भन्छन्। तर यो आकस्मिक खेलाडीहरूलाई मात्र प्रसन्न छ। केही हदसम्म फरक खेल आलोचकहरु बारेमा एउटा धारणा गठन।
कम्प्युटर गेम को सबै भन्दा चिरपरिचित आलोचकहरु, यस Sims4मा देख, एक बिट निराश थिए। यो मात्र प्लस सकिन्छ भन्ने छ - धेरै "यस Sims 4" सम्पादक चरित्र सिर्जना र एउटै मोड को निर्माण भन्ने तथ्यलाई उल्लेख गरेका छन्। खेल लगभग सार्वजनिक क्षेत्रहरु, ग्राफिक्स गरिबी conceptualized (3 भागमा जस्तै स्तरमा रहेका) गएको छ, र सामग्री यो धेरै सानो छ। यो सबै शाब्दिक सम्भावनाहरू संग overflowing छ जो राम्रो पुरानो दोस्रो वा तेस्रो भाग, लागि तिर्सना बनाउँछ। आशा मात्र पूरक मा रहनेछ।
अब हामी यो खेल "यस Sims 4" चलाउन लिन्छ के केन्द्रित हुनेछ। कम्प्युटर आवश्यकताहरु थप "बलियो।" भएका छन् तपाईं "न्यूनतम वेतन" मा खेल सञ्चालन गर्न को लागि, तपाईंले कम्प्युटर दोहरी-कोर 1.8 GHz मालिक हुनुपर्छ। साथै, तपाईंले एकदम शक्तिशाली ग्राफिक्स कार्ड हुनुपर्छ। , खेल को लागि आवश्यक छ धेरै ठाउँ कसरी साँच्चै यो मूल्य छैन भन्न पनि। जसले, शुद्ध रूप मा, यस Sims3शुरू कुनै पनि एडअनहरू पहिले नै तथ्याङ्कले परिचित छन् बिना।
अर्डर सिफारिस "सानो सिस्टम" मा खेल्न कम्तीमा पाँच कोर संग एक कम्प्युटर आवश्यक हुनेछ, र सञ्चालन प्रणालीको मात्र 64-बिट स्वीकार्य छ। यस मामला मा, यो हुनुपर्छ या त Windows7वा विन्डोज 8, वा Windiws 8.1। भिडियो कार्ड पनि बलियो हुनुपर्छ। तथापि, केही मान्छे अब खेल लागि प्रयोग "पुरानो" कम्प्युटर हो।
यो समय खेल "यस Sims 4" को कथा मा एक लाइन आकर्षित गर्न आएको छ जस्तो देखिन्छ। सम्पादक चरित्र सिर्जना, यो ज्ञात भयो रूपमा - यो ध्यान सल्लाह जुन सबैभन्दा लोकप्रिय "कुरा" छ। साथै, खेल को यस संस्करणमा निर्माण र गेमप्लेको महत्वपूर्ण परिमार्जन गरे। खेलाडीहरू र आलोचकहरु दिएको अनुमान केहि अलग हो, अहिलेसम्म सबै प्रक्रिया थप रोचक, रोमाञ्चक र विविध बनाउन, खेल को लागि एक पूरक उत्पादन हुनेछ नै निर्माताहरू पर्खिरहेका छन्। तथापि, जब सम्म हामी प्रयास गर्नुहोस्, तपाईं यसलाई के हो थाहा छैन। खेल आनन्द लिनुहोस्!
कसरी "Varfeys" मा लग हटाउन र FPS वृद्धि गर्न
को rarest Pokémon: कसरी भेट्टाउने तिनीहरूलाई र कहाँ फेला पार्न?
"Sampo" मा रूपमा आफैलाई र अन्य खेलाडीहरू व्यवस्थापक दिन
समर्थन सेवा - यो के हो?
अन्य मानिसहरूको सम्झनाहरु मा जीवन। Dezmond Mayls - "वस्तु №17»
कसरी बार Kraft "Maynkraft"।
Plexopathy brachial प्रतान: लक्षण र उपचार
पाइपलाइन युरोप युक्रेन मार्फत - र मार्ग योजना
घर lures: प्रक्रिया घरमा विनिर्माण
यस हात्ती कसरी जान्छ? गो आंकडा जस्तै - चेस
"इन्डियाना जोन्स र डुम को मन्दिर": अभिनेताहरु र षड्यन्त्र
दिन Sarov को सेन्ट Seraphim सम्झनामा को
प्रयोग र प्रतिक्रियाको लागि "एक-cerumen" सङ्केत गर्छ
सबै भन्दा राम्रो समुद्र तट यूएई: फोटो र विवरण
एक व्यक्ति लागि आनन्दको रहस्य के हो?